🥇 uphendlo-mali lwabasebenzi
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 525
Ividiyo ye-accounting yabasebenzi
Uku-odolwa kwengxelo yabasebenzi
Ubalo-mali lwabasebenzi kufuneka lwenziwe ngaphandle kokusilela kusetyenziswa uncedo lwabasebenzi bethu abayile inkqubo ye-USU Software system. Ukwenza i-accounting ngabasebenzi, kuya kufuneka ufunde ngononophelo kwimisebenzi emininzi ekhoyo ye-USU Software base base, kuphuhliso lobalo-mali lwayo olunika uncedo lwenguqulelo yedemo yethu, eyinkqubo yasimahla nelula ngokobuchule bayo. Kwi-accounting yomqeshwa ngamnye, ukusebenza okongeziweyo kwenkqubo ye-USU yeSoftware yenkqubo yokunceda kuluncedo olukhulu, abathi abasebenzi bethu abakhokelayo bancede ukongeza kwisicelo sabathengi. Izinto ezahlukeneyo ezinokwenzeka kwifomathi efikelelekayo zinegalelo kuphuhliso olusebenzayo lokunikwa kwengxelo kweenkqubo zomsebenzi ngokwaziswa kwamaxwebhu ayimfuneko kwisoftware. Ubalo-mali lwabasebenzi kufuneka lwenziwe ngolawulo olupheleleyo lobalo malunga nomgangatho womsebenzi kunye nesantya sokwenza ukuhamba komsebenzi. Ukuphendula ngomsebenzi okude, eyona ndlela ilula yokwenza isicelo kuluhlu olubanzi lwemisebenzi, izinto ezahlukeneyo eziyimfuneko ezinokuthi zisetyenziswe njengoko bekucetyiwe. Iifowuni zomnxeba ziyayityeshela inkcazo yomsebenzi wazo kwaye zisebenzisa iinkqubo ezahlukeneyo ezingalunganga ngexesha lomsebenzi. Kodwa ngenxa yemeko yesifo, uninzi lwamashishini alunandlela-mbini ngaphandle kokutshintsha basebenze kude nolawulo olupheleleyo kuluhlu lwabasebenzi. Ngokwefomathi yobalo olude, ngexesha lomsebenzi, kunokuvela imibuzo eyahlukeneyo, apho kufuneka unxibelelane nenkampani yethu ukuze uncede, apho iingcali zethu zinokubonelela ngengcebiso kwangexesha. Umncedisi obalulekileyo kwinkqubo yokudala amaxwebhu kunye nenkqubo yokubekwa kweliso kulawulo olunokuthi luncedwe yinguqulelo esele ikho yesoftware, ekhawulezisa yenza uluhlu olululo lwezenzo. Uxelo olukude lwabasebenzi lwalufuneka phantse kuwo onke amashishini atshintshele kwi-akhawuntingi kuba kwabakho ukwehla okukhulu ekusebenzeni okubangelwe kukungaziphathi kakuhle kwabasebenzi kuxanduva lwabo ngqo lomsebenzi. Iziganeko zonyaka ophelileyo azishiyanga nayiphi na inkampani kwindawo ezinzileyo kodwa ziyisingele phantsi imeko yezoqoqosho kumashishini amaninzi athe aphulukana nelahleko, ngakumbi, yonakala. Umjelo opheleleyo weentloko zamacandelo ohlukeneyo eshishini ajika kwinkampani yethu ukuze acoce amandla abo okusebenza, ngokunxibelelene nenkqubo yobalo lweNkqubo yeSoftware yeUSU iye yaphucuka kakhulu, kunye nokukhula kwemfuno kwintengiso yentengiso nayo inyukile. Kukhuselekile ukutsho ukuba wazise umhlobo othembekileyo nothembekileyo kwinkampani yakho kuyo nayiphi na imibuzo kunye neenkqubo zomsebenzi wokunikwa kwengxelo ngokusebenza ngokukuko ngokwefomathi yenkqubo ye-USU yeSoftware yenkqubo. Ngoncedo lwetekhnoloji yale mihla yedijithali, uyakwazi ukulawula ngexesha elifanelekileyo nangokufanelekileyo abo bangaphantsi kwakho kunye nabasebenzi abaqhuba kude accounting. Inkqubo ngokuzenzekelayo ibeka esweni ukwenziwa kwemisebenzi yabasebenzi ukusukela ekuqaleni kosuku lokusebenza ngokufaka isivamvo sokujonga esethutyana. Ingcaciso ifunyenwe ngokukhawuleza ukuba iqhutyelwe phambili kwaye iqinisekiswe kulawulo lwenkampani, nakubasebenzi kunye nesebe lobalo mali ukuze zisetyenziswe ngexesha lokurhola kunye nentlawulo eyongezelelweyo. Ukudalwa kwengxelo yobalo kukhetho lomthengi kunikezelwa nakweyiphi na imizobo, inokuba ziitshathi, iigrafu, iitafile, iimbali. Ukuthathela ingqalelo imeko yamva nje, singatsho ngokuthe ngqo ukuba imfuno yezi software ikhule ngokubonakalayo, ngaloo ndlela inabathengi bayo abaqhelekileyo, isiseko seSoftware ye-USU ifumene uphononongo oluninzi kunye negama elime kakuhle. Ubhaliso lwabasebenzi olukude lubalulekile kwicandelo lolawulo, elinokuthi likwazi ukuchonga abasebenzi ngokungakhathali kwimisebenzi yabo kwaye kuthi ndlela-ntle kubo kuba umntu engenakuguqulwa. Isiseko seSoftware ye-USU, ukusukela oko yaqalwa, idlulisile nakuphi na ukukhangela ukuba siyakwazi ukubonisa ubungangamsha bayo ngaphezu kwesinye isoftware ngokufumana, ukuya kwelinye inqanaba okanye enye, ubungqina benyani yeziphene. Ukuba sithelekisa inkqubo ye-USU yeSoftware kunye nolunye ugcino lwedatha, unokuyiqonda indlela elula nesebenzayo yokusebenza kwesoftware, kunye nokukwazi ukufunda ukusebenza ngokwakho. Eyona ndlela ilula yokulandela umkhondo ngethemba lokujonga iscreen somqeshwa, ngokwazi ukunxibelelana nekhompyuter yakhe kunye nokufumana idatha ngohlobo lwezifinyezo zalo naliphi na ixesha lokusebenza. Ngaphambi kokuba uqale ukujonga abasebenzi, abalawuli beenkampani kufuneka bazise abasebenzi ngalo mzuzu ukuba bandise imveliso kunye nokunciphisa ukuphumla. Kwiindlela ezahlukeneyo zokuhamba komsebenzi, ungasebenzisa nawaphi na amaxwebhu aphambili ukufunda uluhlu lwejenali ye-USU Software base accounting. Ngokufunyanwa komkhosi wolawulo olongezelelekileyo kunye namandla okuphendula, awuyi kuvumela abasebenzi ukuba bafumane umvuzo wabo ngokukhawuleza, kwaye wonke umntu kufuneka, njengangaphambili, abe nexesha lokwenza imisebenzi yabo. Ukusukela, ngexesha lobunzima, amashishini amancinci naphakathi ahlupheke kakhulu, akukho sidingo sokuthetha malunga nokuphumla kwabasebenzi, abanokujongela phantsi imeko yezoqoqosho enzima yeenkampani. Ngabasebenzi baseofisini kuphela abatshintshela kwifomathi ekude yokuqhuba imisebenzi, kunye nabasebenzi abasebenza ngemveliso bayaqhubeka nomsebenzi wabo evenkileni, njengangaphambili. Kuyacaca ukuba le ndlela yokuphuma inceda imeko enzima, ekufuneka isindisiwe ilahleko ezimbalwa njengoko zinokwenzeka kuqoqosho nakumashishini. Ukuya kude kunceda ukulungelelanisa ukhuphiswano lwenkampani kunye nenzuzo ngelixa unciphisa iindleko ezahlukeneyo kunye nenkcitho. Abasebenzisi bayakwazi ukubala umgama noluhlu lwabasebenzi ngokufaka ulwazi ekubaleni umvuzo, ngokwekhadi lengxelo elikhethekileyo elinamanqaku eeyure ezisetyenziweyo ngosuku. Ukuba kukho uthungelwano lwendibaniselwano, ibekwa esweni ngokufanelekileyo, ibonelela ngenani elingenamda labasebenzi abanesakhono sokusebenza kude. Abasebenzi banokunxibelelana ngeziqhamo ngakumbi nabanye besebenzisa ifomathi eyahlukileyo yamathuba okujonga ulwazi olugqityiweyo lomnye kwimowudi yokujonga. Unokutshintsha ngokuzimeleyo useto lomntu ngamnye kwinani lemisebenzi yakho kwindawo yogcino lwedatha yeUSU Software. Iinkampani zabo nabuphi na ubungakanani zinokuthenga inkqubo yenkqubo yesoftware ye-USU, ejolise kubo bonke abathengi, ngaphandle kwesikali semveliso yabo. Ukucwangciswa okucacileyo nokulula kwesiseko sedatha ye-USU yesoftware luluncedo olukhulu kwinkampani, ngokunxibelela kuyo ukwenza ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo imisebenzi enikezelweyo kwinkampani yolawulo kwaye uyithumele ngaphandle kokuqinisekisa nge-imeyile. Ngokufunyanwa kwenkqubo yesoftware ye-USU ngexesha lobunzima, kunokwenzeka ukugcina ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo irekhodi labasebenzi kude kwimisebenzi yabo.
Inkqubo yobalo-mali ikhula ngokuthe ngcembe kwisiseko sekhontraktha ngenkqubo eyimfuneko yokugcwalisa iincwadi zesalathiso. Kwimbopheleleko yamatyala akhoyo, uqala ukuvelisa amaxwebhu kwisiseko sokutyikitywa ngawo omabini amaqela. Usuku lokusebenza komqeshwa ngamnye kufuneka lulandelwe ngokucacileyo ngenani leeyure ezisetyenzwe kwisoftware. Nawaphi na amaxwebhu ayimfuneko anokufunyanwa ngokuzenzekelayo ngabalawuli benkampani, kunye nabathengi nababoneleli.
Uninzi lwee-accrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr database ezenziwa ngokupheleleyo kwiziko ledatha zaza zatshintshelwa kwindawo ekhethekileyo.
Unokwenza ngokukhawuleza ukubala ukwenziwa kwemivuzo kwisoftware enedatha kwiintlawulo ezongezelelweyo. Uqala inkqubo yokungenisa ulwazi kwindawo yogcino lwedatha entsha ukuze uqalise ngokukhawuleza ukusebenza ngolwazi olufunyenweyo. Kuya kufuneka wazise abasebenzi bakho ngenani lomsebenzi owenziwe ngabo, ngokujonga abagadi babasebenzi bonke abakhoyo. Abasebenzisi banokuvelisa idatha kwiinkqubo zebhanki ngokubhekisele kwiinjongo ezingezizo ezemali ngokukhawuleza nangempumelelo kwisoftware.
Ingeniso yemali ekude yenziwa ngokupheleleyo kwiziko ledatha ngokufakwa kwedatha kwincwadi yemali ukulungiselela iindleko kunye neerisithi. Kule nkqubo, abasebenzisi banokwenza uluhlu lweempahla besebenzisa izixhobo zangoku zokufaka iikhowudi. Kuya kuvela kwisoftware ukwenza iishedyuli ezahlukeneyo zomsebenzi ezinokubonelela ngomfanekiso opheleleyo wento eyenzekayo. Imizobo inyusa umhla wokusebenza kwabasebenzi ngendlela yokuthelekisa nakwindlela yokusebenza kwezemfundo ekwenzeni umsebenzi kwisoftware.
Inguqulelo yedemo yesilingo yenkqubo ichaphazela ngokufanelekileyo umnqweno womthengi wokuthenga esona siseko. Uyakwazi ukufaka inkqubo ephathekayo kwimizuzu embalwa kwiselfowuni, enceda ukulawula abasebenzi ngelixa bephuma eofisini. Kuya kuvela ekungeneni kwegumbi ukufaka izixhobo ekubonakaleni kwembonakalo, enceda ukubala idatha yobuqu ngesoftware.
Ukuseta ngokukhawuleza amaxwebhu, kwanele ukusebenzisa i-italics kwiinjini yokukhangela kwaye uchwetheze igama elipheleleyo ledatha. Ngaphambi kokuba uqale ukusebenza kwisoftware, kuya kufuneka ubhalise ngokukhawuleza, enika ulwazi malunga nokungena kunye negama lokugqitha labasebenzi.
Naziphi na iikhontrakthi kunye necala lezemali ziboniswa ngokuzenzekelayo kwisoftware ngenkqubo yokuhlaziya.
Abasebenzisi bayakwazi ukusebenzisa iitafile zesikhokelo ezahlukeneyo ukulawula kunye nokukhokela inkqubo yokujonga. Ngokusebenzisa umyalezo wokuthumela imiyalezo, ungasebenzisa ulwazi lwabathengi kwaye ugcine iirekhodi zabasebenzi ukude. Ukudayala okuzenzekelayo okucwangcisiweyo kulungiselelwe ngendlela yokuba kwazise egameni lenkampani yomthengisi kwaye kuqhuba imowudi ekude. Kwinkqubo yolawulo lwamaxwebhu, unolwazi oluyimfuneko, ogqithisela ngendlela yokungenisa kwindawo ekhuselekileyo ekhethiweyo. Inkqubo kwinkqubo yemisebenzi ekude ibonisa amanani kumsebenzi owenziwa ngabasebenzi. Ukuba ujongano olulula nolula kwiziko ledatha, uya kuba nakho ukuzibonela ngokwakho kwaye ungabandakanyi iingcali zangaphandle. Ngokwenziwa kweengxelo ezizodwa kule nkqubo, uyakwazi ukulawula abathengi abangakhange bagqibezele ngokupheleleyo ukuhanjiswa kude. Unolwazi oluphantsi kolawulo kwimeko yogcino, inani lokuhamba kwempahla, iimpahla kunye nezinto.